UDJ phonsela amadoda akuleli inselelo yokuthi kumele ayosokwa | News24
UDJ phonsela amadoda akuleli inselelo yokuthi kumele ayosokwa
Vuma FM,DJ Phumlani Nkwanyana elungiselela ukuqalisa ukusoka kwenye yemitholampilo eThekwini.
UDJ Phumlani Nkwanyana weVuma fm , usephonsele inselelo onke amadoda ukulele ukuthi aye kosoka, ngenhloso yokunciphisa amathuba okungenwa isifo sengculazi kanye nezinye izifo zocansi ezithathelanayo.
Ngokucwaningo kuvela ukuthi ukusoka kwehlisa amathuba okuhaqwa ileliciwane ngo 60%,kanti kubuye kuvikele nezifo ezithathelanayo eziyaye zibeke izimpilo yabantu besilisa encupheni.
UDJ Nkwanyana, ungomunye wosaziwayo bakuleli asebephumele obala ngokubaluleka kokusoka. Ubuye futhi wagqongquzela abesifazane ukuthi benze okulungile ngokugqonqguzela abayeni babo noma amasoka abo ukuthi aye kosaka njengoba kwenziwa mahhala ezikhungweni zikahulumeni.
“Ngithanda ukukhuthaza omama ukuthi basekele izingane zabo ukuthi ziyosokwa ngoba kuba lula ,kuyashesha nokuphola uma besokwa besebencane,futhi kunemiphumela emihle kakhulu njengoba kuvimbela amathuba okuhlaselwa isifo somdlavuza wabesilisa,”kubeka uNkwanyana.
Kulenyanga,uNkwanyana ugasele kweminye yemitholampilo yaseThekwini lapho afike wasoka khona.Uthi ngesikhathi efika kulomtholampilo ebenovalo kodwa waqina njengendoda wangabe esabuyela emva.
“Kube into nje yesikhashana,futhi bekungebuhlungu nhlobo,ngikwenze lokhu ngoba kunemiphumela emihle kakhulu ikakhulukazi ngakwezempilo,njengoba kwehlisa amathuba okuthola igciwane lengculazi,kodwa engifisa ukukusho ukuthi ukusoka akusho ukuthi umuntu kumele angabe esalisebenzisa ijazi lomkhwenyana uma eya oncansini,”kubeka uNkwanyana. Uqhube wathi size kungebuhlungu ukusoka kodwa kubalulekile ukuthi umuntu okade esoka agweme ukubuka izinto ezizomeza afise ngoba lokho kuyaye kuvuse induku bese kuba buhlungu.
UNkwanyana, uyinxusa lakwa- MMC Man Up, ubuye futhi abe ngusekela mongameli we-Africa Break the Silence, okuyinhlangani engenzi nzuzo ehamba ifundisa abantu abasha ngobhubhane lengculazi kanye nezinye izifo ezithathelanayo ngokocansi.
Ubuye wachaza ukuthi nenhlangano yabo yasungulwa ngonyaka ofike emva komhlangano wamanzwe ngamazwe lapho kwakubhungwa khona ngobhubhane lweciwane lengculazi,kanti abakwenzayo ukuthi bahambele zonke izindawo zakuleli lapho bekhuthaza khona izakhamuzi ikakhulukazi abesilisa ukuthi basoke babuye bazithibe ngokocansi.
'We won't gloat as DA crumbles', note IFP and Cope but De Lille says GOOD bye